How-To – Page3– Myanmar Mobile App
How-To Mobile Phone Tutorial
HomePod ကို Apple TV နဲ့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ
Zawgyi Version HomePod လေးကို Apple TV ရဲ့ sound bar အဖြစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်လိုပါသလား။ မကြာသေးခင်က၀ယ်ထားတဲ့4K UHD television set တွေက အသံအတွက် သိပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် HomePod လေးဟာ Apple TV နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ အသုံးပြုလိုက်ရင် အသံကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်။ HomePod ကို content ရှာခိုင်းတာမျိုး၊ Apple TV မှာ လိုင်းပြောင်းခိုင်းတာမျိုး သုံးမရပေမယ့်လည်း သူ့ကို sound bar အဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ HomePod ကို iPhone ၊ iPad နဲ့ ချိတ်ဆက်ရမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ Apple TV နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်လို့အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ […]
Posted on June 16, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
HomePod Stereo ချိတ်ဆက်နည်း
Zawgyi Version Apple က Apple ကို iOS 11.4 update အဖြစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ AirPlay2ကို iOS 11.4 မှာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အပြင် သူဟာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ feature တွေ၊ ကြန့်ကြာနေတဲ့ feature တွေနဲ့အတူ ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ AirPlay2ရဲ့ အဓိကfeature တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ HomePod တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ စတူရီယိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်မှာ home စပီကာနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ feature အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုတွေများဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စမ်းသပ်ချင်စိတ်လေးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီစာကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ များများစားစားလုပ်စရာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ HomePod stereo လေးကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ HomePods […]
Posted on June 2, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Windows အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Function Keys များ
ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်များရဲ့ ထိပ်ဆုံး တစ်တန်းမှာ F1 ကနေ F12 အထိ ဖန်ရှင်ကီး ၁၂ ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစုဟာ ဖန်ရှင်ကီးများရဲ့ စွမ်းရည်ကို မသိကြတဲ့ အတွက် အသုံးပြုလေ့ မရှိကြပါဘူး။ စာရေးသူ အပါအ၀င် ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူများဟာ ဖန်ရှင်ကီး တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်ရဲ့ စွမ်းရည်ကိုသာ သိရှိ အသုံးပြုနေကြတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖန်ရှင်ကီး အားလုံးကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ F1 – Program အားလုံးနီးပါးရဲ့ Help Screen ကို ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ F2 – Select လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင် သို့မဟုတ် ဖိုဒါ တစ်ခုကို Rename […]
Posted on May 30, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Android မှာ အင်တာနက်ကို ပိုမြန်အောင် ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ မြန်ဆန်တဲ့ 4G LTE ဆက်သွယ်မှုများကို နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးမှာ အသုံးပြုနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်နေထိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ မိုဘိုင်း အင်တာနက်နှေးကွေးနေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အမြန်နှုန်းထက် ပိုမို လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ဖုန်းဟာ နှေးကွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါ နည်းလမ်းများက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Opera Max Opera Max က ဒေတာတွေကို ချုံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကို လျှင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုစေနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုများကြည့်ရင်လည်း သူက မထစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Opera က သူတို့ရဲ့ App ဟာ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်စေတယ်လို့ မကြာခင်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ […]
Cloud Storage မှာ သင့် ဒေတာများကို လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
Cloud Storage များဟာ အင်တာနက်မှာ ဖိုင်များ သိမ်းဆည်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့် ဒေတာများ လုံခြုံ စိတ်ချရပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းများစွာ ရှိပါတယ်။ Cloud မှ သင့်ဒေတာများဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ အများစုက ထင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ထင်မြင်မှုဟာ မှားပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိတဲ့အတွက် သင့် Cloud မှ ဒေတာများကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ လုံခြုံရေး နည်းလမ်းများ • သင်သုံးမယ့် Cloud Storage ရဲ့ Terms & Conditions ကို ဖတ်ပါ။ • သင် Download, Upload လုပ်တဲ့ ဖိုင်များကို Encrypt လုပ်ပေးတဲ့ […]
Posted on May 29, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Android မှာ Contacts လေးတွေထပ်နေတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Zawgyi Version စမတ်ဖုန်းလေးတွေမပေါ်ခင်တုန်းက contacts လေးတွေကို နေရာအတော်များများမှာ မှတ်ထားကြတယ်။ Phone contacts တွေကို ဖုန်းထဲမှာ Phone contacts တွေကို email ID ထဲမှာ၊ Facebook contacts တွေကို Facebook မှာ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီနေ့မှာတော့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့ contacts တွေအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်လေးကတော့ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်မကောင်းပြန်ပါဘူး။ contacts တွေ ထပ်ကုန်ပါတယ်။ Android ပေါ်မှာဆိုရင် သင့်ရဲ့ contacts ကို sync လုပ်တဲ့အခါမှာ Google ကို သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Google ID နဲ့ ဖုန်းအသစ်မှာ ၀င်လိုက်တယ်ဆိုရင် contacts တွေကို အဲဒီဖုန်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ […]
Posted on May 29, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Android ကနေ iPhone ကို contacts တွေ ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ
Zawgyi Version iPhone X က Face ID feature ကို ကြွေဆင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အနီလေးကို စွဲမက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် iOS ကိုင်တော့မယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ contact တွေကို Android ကနေ iPhone ကို ပြောင်းဖို့အချိန်ကျပါပြီ။ ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်လေးကို ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမှာလဲ ဦးဏှောက်စားနေတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များ Android ကနေ iPhone ကို contact တွေ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Android version 4.0 နှင့်အထက် ၊ iOS9နှင့်အထက် ဟန်းဆက်တွေကို အသုံးပြုနေရမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ iPhone5နှင့်အထက် ၊ iPad 4th generation […]
Posted on May 28, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Jailbreak မလိုဘဲ iPhone X မှာ Always-On Display ရအောင်လုပ်နည်း
Zawgyi Version iPhone X သုံးစွဲသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုခွင့်ရနေတဲ့ feature အချို့ကို မနာလိုမိနေလား။ အဲဒီထဲကတစ်ခုကတော့ Samsung နဲ့ အခြားသော Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ရနိုင်နေတဲ့ always-on display feature လေးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ App Store ပေါ်မှာ အသစ်ရောက်လာတဲ့ app လေးက iOS အတွင်းပိုင်းကို အနည်းငယ်ချိန်းပေးမှာဖြစ်လို့ iPhone X ရဲ့ OLED display မှာလည်း AOD ကို ခံစားနိုင်တော့မှာပါ။ ဒီတော့ jailbreak မလုပ်ဘဲ ဘယ်လိုလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ အဆင့်(၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ OLEDX app လေးကို ဖုန်းမှာသွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ app ဖြစ်ပြီး […]
Steam Link App ဖြင့် သင့် iPhone , iPad မှာ ပီစီ ဂိမ်းများကို ကစားနည်း
အရင်တုန်းကတော့ ပီစီ ဂိမ်း ဖြစ်တဲ့ The Witcher III ကို သင့် အိုင်ဖုန်းမှာ ကစားဖို့ ဆိုတာ မဖြစ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာတော့ ကစားနိုင်တော့မှာပါ။ Valve ရဲ့ Steam Link App ကို လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ iOS အတွက် ဖြန့်ချီပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်အတွက်တော့ သူ့ကို ရရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ iOS Version အတွက်ကိုတော့ Apple ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရဖို့ စောင့်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ App က PC or Mac မှ ဂိမ်းများကို သင့် အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပတ်မှာ ကစားလို့ ရအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ […]
Posted on May 21, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
Gmail ရဲ့ AI စွမ်းအားသုံး ‘Smart Compose’ လေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ
Zawgyi Version ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Google’s I/O developer conference မှာ Smart Compose ဆိုတဲ့ feature လေးကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ နာမည်လေးအတိုင်းပါပဲ။ Smart Compose လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ စာသားလေးတွေကို ဘာပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ normal predictive text feature ကတော့ ဘာစကားလုံးပြောမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပြီး Smart Compose ကတော့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို ခန့်မှန်းပေးမှာပါ။ ဒါ့ပြင် Smart Compose က သူ့ရဲ့ခန့်မှန်းမှုတွေကို သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြိုက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google က ဒီလနောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုစောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်တွေ ကုန်လွန်သွားပါပြီ။ AI အခြေခံ email […]
Posted on May 15, 2018 May 15, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)